पर्यावरण नारी पृष्ठ3ru en pl uk de fr tr ar eo zh-tw az af be bg bs bn zh-cn ca cs ceb sq hy da eu hr et nl fi tl ka gl el ht ha iw lv ga it is la jw lt id ig hu mt ms ko mi no mg hmn pt ja ro st sr kk ne pa si my so es su sv fa km uz cy yo zu vi lo ur tg mk mn yi gu hi kn ml mr ta te th ﻿
नेविगेशन मुख्य सपनाहरु फैशन स्वास्थ्य Recipes युक्तिहरु चिन्हहरू << 123456>> कीमोथेरेपी पछि बाल पुनर्स्थापित कीमोथेरेपी पछि बाल regrowth को समस्या क्यान्सर संग लगभग सबै विरामीहरु लागि सान्दर्भिक छ। बाल सर्वोत्तम गहना महिलाहरु विचार, र पनि रोग संग संघर्षरत छ किनभने Alopecia (विशेष गरी महिला) सधैं, अनुभव को एक नम्बर संग सम्बन्धित छ, म राम्रो हुन चाहन्छन्। कीमोथेरेपी पछि बाल बढाउनुहोस् गर्दछ ?
रूसी sundress प्रत्येक राष्ट्रको आफ्नो परम्परागत पोशाक छ। रूस मा, यस्तो सूट swordsman, प्यान्ट र मानिसहरू लागि कोट हो र महिला लागि शर्ट संग ड्रेस। रूसी राष्ट्रिय महिला sundress अक्सर sleeveless सिलना एक पोशाक छ। बाहिरबाट विगतमा प्रत्येक क्षेत्रमा कपडे को यस प्रकार कटौती र ऊतकहरुमा प्रयोग भिन्नता थियो। खैर, यो पूर्वी र मध्य युरोप को sundresses र बासिन्दाहरूले जस्तै थियो। यो किसान जन उत्तरी र मध्य क्षेत्रमा मा वोल्गा क्षेत्रमा परम्परागत रूसी sundress, यो Nikon क्रनिकल मा प्रविष्टि द्वारा evidenced रूपमा यो पहिलो उल्लेख फिर्ता वर्ष 1376 को तिथिहरु हुनत, प्रारम्भिक XIX शताब्दीमा लगाउने थाले। पृष्ठभूमि समय भन्दा आकार र शैली sundress परिवर्तन। दुई सय वर्ष पछि, अवस्था नाटकीय परिवर्तन भएको छ आफ्नो मात्र noblewoman थिए रूपमा peasants को सम्पत्ति गर्न belonging महिला लागि XIV शताब्दीका रूसी sundress को शुरुवात भने, उपलब्ध थियो। जब पत्रुस म, लुगाफाटा यस प्रकार व्यापारी गर्न पहिलो फर्केर, र त्यसपछि prostolyudinsky मा। तर क्याथरीन द्वितीय महान् महिलाहरु को dressing कोठा गर्न sundress फिर्ती योगदान, र पनि शानदार नायिका संग XXI शताब्दीका को पूर्व यस पोशाक प्राप्त। र यो दिन धेरै क्रिसमस पार्टी रूसी शैली मा sundresses मा तैयार सान्ता क्लाउज को granddaughters, बिना सक्दैन। शैलीहरू को Stylistic विविधता हामी उल्लेख रूपमा शैली, रंग र प्रकार क्षेत्र निर्भर सिलाई sundress ऊतक लागि प्रयोग गरिन्छ। बालिका र महिला लागि रूसी sundresses को सबै भन्दा साधारण प्रकार अलिकति बहिरा raskoshennye, सीधा पट्टियाँ, कडा छोटो-sleeved मोडेल र अगाडि बटनमा शैलीहरू, र bodice गर्न सिलना एक स्कर्ट संग raskoshennye छन्। रूसी sundresses एउटा रोचक सुविधा तिनीहरूले सबै वजन धेरै छ कि छ। यो कारण सिलाई गर्दा कुशल कामदारहरूको आइटम को एक किसिम प्रयोग भन्ने तथ्यलाई छ। यो heaviest मोडेल - एक उत्सव रातो, सेतो र नीलो रूसी sundresses। विगतमा, तिनीहरूले हेम सजाउनु एक सिलाई ऊन ऊतक पहिले दाग ओक छाल decoction वा alder, पातलो चुल्ठो वा मखमल प्रयोग। साटन बनेको tunics, - एक दैनिक विकल्प सीधा Sayan लगाएका छन्। Sayan को रंग मालिक को उमेर मा निर्भर। जवान बालिका रातो sundresses वा बुरगुण्डी, र पुराना महिलाहरु लगाएका -। कालो वा नीलो आधुनिक व्याख्याहरु यो रूसी शैली sundresses मा आज fashionistas संग लोकप्रिय कुनै आश्चर्य छ। परम्परागत रूसी शैली मा कपडे, कढाई, बेल, appliques सजिएको - पावलले Poiret र Yves सेन्ट Laurent महिलाहरु जस्तै पनि यस्तो महत डिजाइनर कहिलेकाहीं यस्तो नवाचारै प्रोत्साहित। र Vyacheslav जाइत्सेव - sundresses, kokoshniks, फर capes को साधारण ज्ञात admirer। निस्सन्देह, यी लुगा दैनिक कल र यो असम्भव छ commonplace, तर अवसर त्यहाँ सबै नै तिनीहरूलाई लगाउने गर्न। पहिले, एक पैदल लागि गर्मी मा थकित सकिन्छ ज्योति कपडा sundress बनाउनुभयो। दोश्रो, यो थीमाधारित उत्सव व्यवस्था, विवाह celebrate गर्न अब सुशील छ। किन एक शानदार दुलहीको उत्सव रूसी sundress धारण छैन?
पतिको देखि छोडपत्र बच्न कसरी? पहिले, तपाईं सम्बन्धविच्छेद बन्द देखाउने आफ्नो पासपोर्ट टिकट अहिले आफ्नो वैवाहिक स्थिति को गर्व र थिए?
शरद ऋतु विवाह कपडे सुन्दर शरद ऋतु कपडे बस न्यानो हुन सक्छ, र एक सुन्दर शरद ऋतु आत्मा पूरा गर्न सक्छन्। यो समय जाडो तीन लामो महिना यो गुमाउने पहिले आफ्नो धन को उज्ज्वल रंग मा प्रदर्शनकारी को प्रकृति, मा। यो सुन्दर सुनको सजावट छ, र दुलहीको आफ्नो सुन्दरता तिनीहरूलाई आय हुँदैन किनभने त्यसकारण, शरद ऋतु विवाह, सधैं विशेष छ। दुल्हन लागि: शरद ऋतु लागि विवाह कपडे कपडाहरु शरद ऋतु सुन्दर, तर सकेसम्म पनि न्यानो मात्र हुनुपर्छ। डिजाइनर बेल लामो sleeves र पारदर्शी प्यानल संग मोडेल बनाउन। पातलो ऊतक न्यानो गर्दैन, तर एक शैली को पोशाक चिसो लागि डिजाइन गरिएको छ यो स्पष्ट छ कि बनाउँछ। गरेको डिजाइनर देखि सर्वाधिक लोकप्रिय शरद ऋतु मोडेल हेरौं: पूर्णतया 2012 मा दुलहीको लागि कपडे बनाउन मा conveyed Elie साब शरद ऋतु मूड: यो guipure को भयो स्कर्ट र लामो-sleeved पोशाक मा सुनको ऊन फूल संग एक भव्य मोडेल छ ।
अर्को शरद ऋतु मोडेल ध्यान योग्य - यो एस्तर छ, उनको निर्माता वेरा वांग कढाई सजिएको र छोटो sleeves जोडी स्कर्ट। यो पोशाक टेलीभिजन श्रृंखला "बातुनी केटी" मा दुलहीको गरेको पोशाक थियो र यो उहाँको धेरै लोकप्रिय भयो। गिरावट मा एक विवाह लागि पोशाक फर केप पूरक छ, र जूता बन्द। Pals गर्न: शरद ऋतु साँझ कपडे धेरै कवि "सुन" भनिन्छ पतन कुनै आश्चर्य - पहेंलो शरद ऋतु पात पेड सुन ढाकिएको छन् भन्ने भावना सिर्जना जो एक अद्वितीय र रोमाञ्चक वातावरण सिर्जना गर्न। डिजाइनर, साथै कवि, रचनात्मक मान्छे, र यो शरद ऋतु सुविधा मदत तर आफ्नो मोडेल कपडे मनन गर्न सकिएन। उदाहरणका लागि, Elie साब तिनीहरूले सुनको भएका छन् कि भावना सिर्जना त्यस्तो गिरावट साँझ कपडे लागि सिर्जना भएको छ। यो शानदार सजावट vyshivnomu गर्न रहस्यमय पारभासकता देखि सुन रिबन, कमजोर sequins र चिल्ला संक्रमण सजिएको गिरावट लागि सुन्दर पोशाक। को योनि सामान्य स्वस्थ महिला मा र योनि देखि एक श्लेम लाग्एको छुट्टी हुनुपर्छ सक्छ। यो योनि देखि यस खकार सामान्य छ
सामान्य श्लेम लाग्एको छुट्टी मा yellowish वा अलिकति turbid हुन सक्छ। ovulation अघि योनि दिन देखि सफेद खकार जारी अधिक अक्सर। यो योनि देखि खकार मोटी र एक सानो राशि मा खींच खडा चक्र को पहिलो आधा मा । योनि देखि पानी जस्तो र स्पष्ट खकार यौन लैंगिक उत्तेजना दौडान सक्छ। चक्र, योनी खकार मलाईदार को दोस्रो आधा मा, यो मासिक धर्म अघि बडा हुन्छ। कहिलेकाहीं असुरक्षित सेक्स पछि, थक्के yellowish रंग जारी छ जो योनि, देखि बाक्लो खकार। ठूलो संख्या मा केही घण्टा पछि, यी तरल छुट्टी र सेतो। योनी खकार एक सुरक्षित काम गरेपछि सेतो को एक धेरै सानो राशि आउँछ। menstrual चक्र को अन्त मा रगतले streaked को योनी खकार, यो महिनाको सुरुमा एक harbinger छ भने। योनी खकार को जन्म पछि मात्र छ, तर पनि sukrovichnye जोड -। lochia रोग प्रक्रियाहरू समयमा योनि देखि खकार विभिन्न रोगहरु मा खकार यो अप्रिय बास्ना पैदा गर्न सक्छ, (greenish गर्न खैरो देखि) रंग परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, छुट्टी पीप वा रगत impurities समावेश, खुजली वा लैंगिक पर्चा को दाह सक्छ। सबै भन्दा खतरनाक - यो ovum, या गर्भपात को detachment संकेत जो यस्तो गर्भावस्था रूपमा श्लेम लाग्एको छुट्टी, संग रगत को उपस्थिति छ। पनि ताजा रगत बिना खैरो छुट्टी वा थक्के गर्भपात वा भ्रूण मृत्युको जोखिम संकेत हुन सक्छ। एक गर्भपतन वा प्रसब ताजा रगत र खकार एक ठूलो राशि पछि uterine रक्तस्राव एक चिन्ह हुन सक्छ। मासिक धर्म अघि वा सहवास पछि , यो cervix (सामान्यतया एक सानो रगत, खकार एक ठूलो राशि मा मात्र शिराएँ) को कटाव यस्तो निर्धारण बिन्दु। अघि वा मासिक धर्म पछि एक खैरो spotting endometriosis एक लक्षण हुन सक्छ। यो अमिलो गन्ध संग, पनीर र कारण खुजली र लैंगिक पर्चा को दाह सदृश धेरै विशेषता खकार छ, (thrush) त्यहाँ candidiasis। एक अप्रिय गंध संग अक्सर, purulent को reminiscent, yellowish वा greenish छुट्टी भडकाऊ रोगहरु मा । तर ठूलो संख्या मा बुलबुले संग, अलग फोम भरेको trichomonas संक्रमण लागि। जब श्लेम लाग्एको छुट्टी को पतन, एक धेरै अप्रिय बास्ना संग कहिलेकाहीं, थक्के र purulent संग आक्रान्त संग क्यान्सर। सामान्य भनिन्छ सकिँदैन जो कुनै पनि योनी छुट्टी, को उपस्थिति - यो स्त्रीरोग विशेषज्ञ गर्न सम्बोधन गर्न एक पटक छ ।
भियतनाम, Phan Thiet - ठाँउहरु हामी तपाईं भियतनाम, Phan Thiet को सहारा शहर को दक्षिणी भाग भ्रमण गर्न, र यसको आकर्षण संग acquainted गर्न आमन्त्रण। बस यस ठाउँमा ध्यान दिनुहोस कि, र यो एक सभ्य समुद्र तट छुट्टी संगठित गर्न सम्भव छ। यो पूर्वाधार मूल्य किफायती, प्राकृतिक वरपर रसीला र आश्चर्यजनक विविध, विकास छ। उदाहरणका लागि, जहाँ तपाईं खाए खजुरका को आसपास मा बढ्दै देख्नु?
पहिलो दिनहरुमा गर्भावस्था को लक्षण निर्णय गर्न सबैभन्दा आधुनिक जोडे ठूलो जिम्मेवारी संग उपचार बच्चाको छ। आज पाठ्यक्रम को एक किसिम तपाईं आफ्नो शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य सुधार गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ गर्भावस्था, लागि तयार गर्न, साथै बच्चाहरु को उपस्थिति योजना त्यहाँ छन्। तैपनि, गर्भावस्था को धेरै जोडे लागि एक अप्रत्याशित घटना हो। जुनसुकै को अवधारणा देखापर्यो कसरी - गल्ति या योजना, हरेक महिला, शिघ्रतिशिघ्र जान्न चाहनुहुन्छ त्यो गर्भवती छ वा छैन ।
गर्भावस्था विभिन्न मैदान मा हुन सक्छ निर्धारित। सबै भन्दा साधारण तरिका - एक गर्भावस्था परीक्षण। यो परीक्षण को सबैभन्दा अवधारणा पछि पहिलो दिनहरुमा प्रश्नको जवाफ। तर मुख्य महिलाहरु मासिक धर्म को ढिलाइ मा पत्ता जब यो विधि, सहारा। Menses उत्पन्न गर्दैन भने, यस बारे दुई हप्तासम्म गर्भावस्था को पूर्वानुमानित अवधि अर्थ। यस सन्दर्भमा, आइमाइहरु थुप्रै प्रश्न रुचि हो "पहिलो लक्षण सबैभन्दा गर्भावस्था देखा कहिले?
<< &nbsp;  &nbsp; 1 &nbsp;2&nbsp;3&nbsp;4&nbsp;5&nbsp;6&nbsp;   &nbsp; >> &nbsp;       साइट सामाग्री को एक निजी संग्रह छ र